Muta otua esi bawanye ego site na ijikota ikike di egwu nke igbe ochicho gi Martech Zone
Ọchịchọ bụ asụsụ ụwa niile. Igbe nchọta ahụ bụ n'ọnụ ụzọ azịza gị niile. N'ụlọ ị na-arọ nrọ ụbọchị banyere ihe ndina ọhụrụ maka ụlọ gị? Google akwa ụra kacha mma maka obere ụlọ. Na-arụ ọrụ na-agbalị inyere ndị ahịa aka ịghọta nhọrọ ndenye aha ha? Chọọ intranet gị maka ọnụego dị ugbu a na nkọwapụta iji kesaa ha.
Na arụmọrụ kacha elu, chọọ ma chọgharịa na akara elu na ala. Ndị ahịa na-azụtakwu ma na-eguzosi ike n’ihe, ndị ọrụ na-arụpụtakwu ọrụ ma na-etinye aka mgbe ha nwere ike ịchọta ihe ha na-achọ, ma nweta ndụmọdụ ndị ahaziri iche.
Site na ahụmịhe azụmahịa dijitalụ na ebe ọrụ dijitalụ zuru ụwa ọnụ, Ọrụ aka na-enyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta nyocha dị ike na nyocha nchọpụta data iji mee ndị ọrụ obi ụtọ ma bulie uru nke data dị.
Ischọ bụ ụzọ karịrị naanị igbe. Ọ nwere ike ịme ma ọ bụ mebie ahụmịhe dijitalụ dum.
Lee ụfọdụ ihe atụ nke etu esi eme Fusion, Lucidworks AI-based platform platform, na-enyere onye na-ere ahịa ụwa aka ịbawanye ego, otu ụlọ akụ dị elu na-ewulite mmekọrịta ndị ahịa miri emi karị, ụlọ ọrụ mmanụ na gas kachasị ukwuu n'ụwa na-eme ka mkpebi ndị data kwadoro, yana nchekwa data ahụike na-akwado nyocha ngwa ngwa na nlekọta ahụike.
Olee otu Lenovo si chọọ imeghe ihe iji mee ka mgbanwe na ịdị mkpa
Mgbe Global Search Lead Marc Desormeau weghaara otu ndị nyocha maka Lenovo.com, ọ jụrụ ajụjụ:
Gini mere na ichoghi ichota dika anyi choro?
Na-achọ iji dochie azịza ọchụchọ ya kachasị ngwa ngwa na ikpo okwu nke nwere ike ịkwado mgbanwe dijitalụ zuru ezu, Lenovo chigharịkwuuru Gartner na Forrester maka ohere ọ ga-ekwe mee. A kwadoro Lucidworks Fusion. Teknụzụ na-emepe emepe nke Fusion gụnyere ngwaọrụ ndị na-apụ apụ nke na-ekwe ka mgbanwe na nhazi wee nwee ike ị rụpụta nsonaazụ ọchụchọ kpọmkwem na akara ngwaahịa, ọnọdụ, asụsụ, onye ọrụ, na ndị ọzọ. Nke a dị mkpa maka ụdị zuru ụwa ọnụ dịka Lenovo nwere ngwaahịa ndị metụtara azụmahịa B2C, SMB, na B2B ma jeere ndị ahịa na ahịa 180 na-asụ asụsụ 60 dị iche iche.
Ndị mmadụ na-amalite ịghọta enwere ezigbo data ebe a bara uru ma anyị nwere ike iji nke ahụ gosi ndị ahịa anyị ahụmịhe ka mma.
Marc Desourmeau, onye ndu ọchụchọ zuru ụwa ọnụ, Lenovo
Mgbe emejuputara Fusion, Lenovo huru onyinye ego ha na enweta kwa ubochi site na ntinye choro site na 95%. Na saịtị ndị ahịa ndị ahịa Lenovo, ọnụego pịa na ibiaghachi egosiwo mmụba dị egwu, na-egosi na ndị ahịa na-achọta ọdịnaya ha na-achọ ngwa ngwa. Ọzọkwa, site na ijikọta onye ọrụ n'ókè—Gụnyere pịa, gbakwunye na ụgbọ ibu na ịzụta- site na iji igwe mụta ihe, ndị otu nyocha wee nwee ike gbanwere ogo nsonaazụ ọchụchọ maka ọnụọgụ data dị na ihe ọmụma ha. Mgbanwe, nke a tụrụ site ugboro ole ndị ahịa na-apị na nsonaazụ mbụ yana nsonaazụ ọ bụla sochiri, emeela ka ọ dị elu karịa 55% na obere ọnwa ole na ole kemgbe ịmalite akara ngosi Fusion.
Ndị ọrụ nọ na Top Bank na-atụ aro iji hazie Ndụ Ndị Ahịa
Otu n'ime ụlọ akụ US kachasị na-agba mbọ inyere ndị ndụmọdụ ndụmọdụ ego ha aka ịmata ngwa ngwa, ndụmọdụ dị mkpa na ngwaahịa maka ndị ahịa. Lọ akụ ahụ nwere ihe karịrị 250 iberibe ego nyocha emepụtara ma bulite kwa ụbọchị na sistemụ ahụ, mana ọtụtụ ndị ndụmọdụ nwere oge iji mara naanị akwụkwọ 15-20. Ọ gaghị ekwe omume ịkọcha ihe niile, kọwaa ha, ma chọpụta nke kachasị dị mkpa maka ndị ahịa 2,000 ọ bụla. Oge o mere iji mata ihe ngwọta pụtara arụpụtaghị ihe na ohere furu efu iji jikọọ ndị ahịa.
Ọchịchọ bụ ihe dị mkpa na arụmọrụ nke onye na - enye ndụmọdụ maka ego wee jikwaa ya gaa na ntinye ego, azụmaahịa ma ọ bụ ọrụ ọrụ ndị ọzọ.
Lucidworks maara na ndị ndụmọdụ ga-achọ imepee mmekọrịta dị n'etiti ọdịmma na usoro omume onye ahịa. Na Fusion, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta ndepụta edepụtara maka nghọta na nyocha nwere ike inyere ha aka ịmata ngwa ngwa Ihe kacha mma na-esote maka ndị ahịa ọ bụla. Financial advisors nwere ike ugbu a Hazie ihe ndị ahịa kwesịrị ịzụta ma ọ bụ na-ere a akpan akpan ego dabere na ọnọdụ na ihe nakawa etu esi na akaụntụ, na-enye na "ị maara m" ụdị ahụmahụ ahịa na-atụ anya. “Next Best Action” automates oge na-eme mkpebi mkpebi ma melite arụmọrụ maka ndị ndụmọdụ ka ha na-ere ọrụ ndị ahịa ezubere iche na obere oge. Ihe a niile mere ka mmekọrịta dị omimi na ndị ahịa na ụba ego.
Budata Ebook Na-adịghị Akwụ ụgwọ: Gbanwee Ahụmahụ Ndụmọdụ Ndụmọdụ na AI
Nnukwu mmanụ na gas wepụtara ihe ọmụma site na afọ 150 bara uru
Otu n'ime ụlọ ọrụ mmanụ na gas kachasị ukwuu n'ụwa nwere ozi nke laghachiri afọ 150 gbasaa n'ofe akwụkwọ, ọdụ data, ngwa, ozi ịntanetị, nkeonwe na nkekọrịta kesara, n'akụkụ ụwa niile. N'ihi na ndị ọrụ enweghị ike ịchọta data ha chọrọ, ha malitere ịgbagha ya, na-emecha mee ka ihe ọmụma ahụ ruo nde 250 nde. Chọta ihe kachasị ọhụrụ, ụdị ziri ezi gafere 28 ngwaọrụ dị iche iche ụlọ ọrụ ahụ siri ike. Edeghị ụfọdụ data na isi mmalite ndị ọzọ karịrị terabyte buru ibu, nke siri ike ịdepụta. Ọbụna mgbe ngwaọrụ rụghachiri nsonaazụ ọma, ndị mmadụ atụkwasịghị nsonaazụ ya-ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ihe ị na-achọ, data ahụ abaghị uru.
Lucidworks batara na ọrụ nke ịmepụta ahụmahụ na-akpali akpali data site na iji nchịkọta iji jikọọ ihe ọmụma silos, mepụta agile katalọgụ nke gbara ha gburugburu na mkpa, na-enyere ndị ọrụ wepụ mkpa azụmahịa ihe ọmụma gafee niile akụkọ ihe mere eme data. Fusion nwere ike nyochaa ọtụtụ nde akwụkwọ site na nhazi asụsụ (NLP) na Bekee, French, German, Russian, mee ka data weghachite gafee data, ma kwado nchọpụta nke ozi ọhụụ site na ndị na-akpali akpali dabere na mmasị ndị ọrụ echekwara. Site na ntinye a, ndị ọrụ nyocha nwere ike iwepụta akụ data a na-ewepụta, ma weghachite ozi ngwa ngwa mgbe ha chọrọ ya, nke na-eduga n'inweta mkpebi ka mma na ịchekwa ego.
AI-Powered Research Portal na-enyere ndị dibịa aka ịchọpụta ma lekọta ndị ọrịa
AllMedx lere anya Google maka ndị dọkịta. Ha maara na ndị dọkịta na-enwe nkụda mmụọ na igwe ọchụchọ dị ka Google na Bing n'ihi na a na-agwukarị nsonaazụ site na ọdịnaya enweghị ntụkwasị obi nke ezubere maka ndị ahịa na ndị ọrịa. AllMedx chere na ndị dọkịta na ndị ọkachamara ahụike ahụike nwere ike irite uru site na ngwa nchọta nke wepụtara ọdịnaya ya naanị site na isiokwu MD-vetted, akwụkwọ akụkọ ahụike dị elu, na ndị ọzọ ahọpụtara, ezigbo ụlọ ọgwụ. Ebumnuche bụ iji kpochapụ ndị na-adịghị mkpa, ụdị mpempe akwụkwọ nke ga-abachaghị uru nye ndị dọkịta na-achọ azịza nye ajụjụ gbasara ahụike.
Mgbe AllMedx wuru corpus a haziri ahazi na-adabere na ọkachamara ọkachamara ahụike, ọ dị ha mkpa ime ka ọ dị mfe ịchọ. N'iji algorithms Fusion's ML, a na-ahazi nsonaazụ ọchụchọ maka onye ọrụ ọ bụla. Nnwale onye ọrụ na-enye ohere AllMedx na pipụ pipeline nke ọma ma bulie ahụmịhe ọchụchọ nke ndị ọrụ. Site na Fusion, AllMedx nwere ike iji obi ike kwado ndị ọrụ dibia ya site na ịnyefe ihe karịrị nde akwụkwọ nde iri na abụọ site na nyocha AI. Dabere na nzaghachi ndị ọrụ dibịa, ndị otu AllMedx kwenyesiri ike na saịtị ahụ ga-abawanye ohere ịnweta ozi dị mkpa, nke nlekọta ahụike ga-enyere aka melite nlekọta ahụike.
Mụtakwuo banyere otu AI si agbanwe ọgwụ maka mma
Choputa Ihe AI-Powered Digital Transformation Pụtara Maka Gị
Ọnụ ọgụgụ kachasị nke ahụmịhe dijitalụ ndị a n'ofe niile bụ iche iche, ma ọ bụ ike ịkọpụta ebumnuche onye ọrụ ọ bụla. Nke a bụ ebe ị ga-emesị hapụ ọtụtụ puku iwu ejiri aka gị rụọ ọrụ ma weghachite ọ bụghị naanị nyocha amụma, mana ngwa igwe, n'ókè, na nhazi asụsụ. Ha niile, teknụzụ ndị a niile na-enye ike ka ọchụchọ gị bụrụ ihe karịrị obere igbe dị n'akụkụ nkuku ihuenyo.
Na igbe ọchụchọ abụghị naanị akụkụ nke ahụmịhe dijitalụ nke chara acha maka mgbanwe-olee oke nkata chatbot gị nwere? Otu n'ime ndozi kachasị baa uru na azụmaahịa ị nwere ike ime maka azụmaahịa gị bụ ịmalite azịza chatbot smart. Ọrụ aka Azịza Smart bụ ihe nkwalite chatbot na-emetụta ihe niile nhazi asụsụ, ngwa igwe, na n'ókè ịchịkọta ebumpụta ụwa na Fusion na nkata chatbot. Ọrụ onwe onye ka mma site na iji nkata nkata nkata na-enye ndị ọrụ ọrụ ọsọ ọsọ ma na-atọhapụ nkwado na ndị ọrụ enyemakadesk iji lekwasị anya na mgbagwoju anya, ikpe. Ndị ahịa nwere afọ ojuju na ndị ọrụ na-etinyekwu aka na ọrụ ha.
Ma ọ bụ igbe nchọta oghere ma ọ bụ onye inyeaka na-arụ ọrụ nke ọma, Lucidworks Fusion na-enye ikike ịhazi ụlọ ọrụ iji hazie, mepee, ma tinye ngwa nyocha ọgụgụ isi na ọkwa ọ bụla, ma na-achọpụta site na nyocha teknụzụ nwere onwe na ụlọ ọrụ ndụmọdụ Forrester na Gartner. Ndị ụlọ ọrụ gafere Global 2000 na-adabere na Lucidworks kwa ụbọchị iji mee ka ndị na-azụ ha na-achọ na ngwa ọchụchọ ngwa ahịa. Nwere mmasị ị chọpụta otu ị ga - esi nweta ọtụtụ ihe na nchọta gị?
Kpọtụrụ Lucidworks Taa
Tags: ọchụchọ a na-akwadoallmedxichekwa ego na banknkataahụmịhe datamgbanwe ntanetịNwokenchọta n'imeLenovondu ndundiegwuNjikọ Lucidworksngwa igwenhazi asụsụomume kacha mmaNlpn'ókèazịza smartsupportobere ọchụchọmebere nnyemaaka
Tupu ya abanye na Lucidworks, Vivek duuru ngwaahịa na mmepe azụmaahịa maka azụmahịa ọchụchọ na Ọrụ Weebụ Amazon, ebe o mepụtara Ọrụ Amazon Elasticsearch ma nyere aka mee ka azụmahịa ọchụchọ ahụ malite na nnabata. N'ime afọ 20 + na sọftụwia Vivek jere ozi na injinia, mmepe azụmaahịa, na ọrụ ngwaahịa na ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere Vizu (nke Nielsen nwetara), Aggregate Knowledge (nke Neustar nwetara), na SBI Razorfish.